Dota2Gods part (2/3) – REDPlayer
[image by valve]
အပိုင်း (၂) ကိုထပ်မံ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Fundamentals တွေဟာ စွမ်းအားကြီး Primordial Entities တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ယောက်ခြင်းဆီဟာ စကြဝဌာထဲမှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအားတွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သူတို့ဟာ Physical Plane ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ နေထိုင်ကြပြီးတော့ သဘာဝစွမ်းအားကို လွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သေဆုံးသွားရင် Fundamental Plane ဆီကို ပြန်သွားကြပါတယ်။ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဟီးရိုးတွေကတော့ io , Chaos Knight , Keeper of the Light , Enigma တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
[image by trogolodite]
12. Hidden Ones
သူတို့ဟာ Hidden Temple ထဲမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဗဟုသုတ အရမ်းကြွယ်ဝပြီးတော့ Unknown Powers တွေကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဟီးရိုးတွေကတော့ Templar Assassin နဲ့ Nyx Assassin တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Maelrawn ခေူ Maelrawn the Tentacular ဟာ ဟိုး ပင်လယ်ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာ နေထိုင်တဲ့ God ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ခန္တာကိုယ်ရှိပြီးတော့ ရေဘဝဲပုံစံ လက်မြောက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ Tidehunter နဲ့ Naga Siren ရဲ့ စကားအရဆိုရင် Maelrawn ဟာ ကြီးမားတဲ့ ရေဝဲ ကြီးထဲမှာ နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
[image by trogolodite]14. Maker of Masks
The Maker of Massks ဟာ Isle of Masks က God ဖြစ်ပြီးတော့ Juggernaut တို့ ရဲ့ God ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Temple of Masks ကို တည်ထောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Zealot Scarabs တွေရဲ့ ဘုရင်မဖြစ်ပြီးတော့ သူ့မျိုးနွယ်စုဝင်တွေဟာ သူ့ကို Goddess တစ်ဦးလို ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ တစ်ခြား Zealot မျိုးနွယ်စုဝင်တွေလိုမျိုးဘဲ သူမဟာ Telepathic ကို ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမဟာ Hidden Hive မှာရှိတဲ့ အထူး တည်ဆောက်ထားတဲ့ နေရာမှာ နေပါတယ်။ သူမဟာ Alchemy ပညာအကြောင်းကို အနည်းအကျဉ်းနားလည်ပြီးတော့ ယခု လက်ရှိ Nyx Assassin ရဲ့ Magic Resistant Shell ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Omniscience ကို All Seeing One လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ လက်ရှိ Dota2 world ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေအားလုံးနီးပါးက သူ့ကို မတွေ့ဖူးကြပေမဲ့လည်း ကိုးကွယ်ကြတယ်။ သူဟာ ဂြိုလ်အလည်ဗဟိုမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ကြယ်စု နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက နေထိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ Ominiscience ဟာ ဟင်းလင်းပြင်တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ သူ့ကိုယ်ကို ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ဝိုင်းကာရန်တာကနေ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်လာတယ်လို့လည်း ဆိုကြတယ်။ သူ့ကိုတွေ့ရဖို့အတွက် Emauracus တောင်စောင်းကနေ ဆင်းပြီးသွားတွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီကို ရောက်ဖို့အတွက် အချိန်တော့ အတော် ကြာလိမ့်မယ်။ All Seeing One ဖြစ်တာကြောင့်လည်း သူဟာ တစ်ခြား Planes တွေကနေ လာတဲ့သူတွေကို ခွဲခြားပြီးသိနိုင်တယ်။ ဥပမာ Chaos Knight ရဲ့ ကိုယ်ပွါးတွေကိုပေါ့။
Polymorphia ဟာ Gods နဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်တူပြီး Morphling က ကိုးကွယ်ပါတယ်။ သူဟာ ရေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး Eternal Patterns တွေကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Poseidon ကတော့ ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ နတ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ Zeus နဲ့ သိပါတယ်။
Raijin ဟာ Celestial တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ Thunderkeg ရဲ့ ခေါ်ယူမှုအောက်မှာ မတော်တဆ ရောက်ရှိလာပြီး သူ့ကို အလွန် ဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Thunderkeg ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြေတွေကို လေတွေတိုက် ၊ ရေတွေလွမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေဟာ နည်းပြောင်းစုံနဲ့ ရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မအောင်မြင်တဲ့အခါ သူ့ကိုသူ အစတေးခံပြီး Raijin နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Storm Spirit အဖြစ် ပြန်လည် မွေးဖွါးလာခဲ့ပါတယ်။
Scree’auk ဟာ နတ်ဘုရားမဖြစ်ပြီး Vengeful Spirit ကို လက်စားချေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအားတွေ ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ဟာ ငှက်နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
Modern Combat Versus အေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း